Dagaal culus oo ka socda duleedka degmada Balcad. – Hornafrik Media Network
Dagaal culus oo ka socda duleedka degmada Balcad.
Dagaal culus oo u dhaxeeya Ciidamada Soomaaliya iyo Dagaalmayaasha Al-Shabaab ayaa saakay ilaa hadda ka socda Duleedka degmada Balcad ee gobalak Shabeelaha dhexe, kadib markii ay Milatariag Soomaaliya weerar ku qaadeyn Fariisan ay Al-Shabaab daganaayeen.
Dagaalkan ayaa bilowday kadib markii ay maleeshiyaad ka tirsan Alshabaab ay fariisimo ka sameysteen deegaan ka xiga dhinaca galbeed degmada Balcad. Rasaata la isu adeegsanayo dagaalkan ayaa laga maqlayaa magaalada Balcad iyo deegaanada u dhow dhow.
Wararka ayaa waxa ay sheegaya in dagaalka uu ka bilowday kadib markii ciidamo uu hogaaminayo Abaanduulaha Ciidamada xoogga dalka Jen. Caanood ay weerareen fariisimaha ay ka sameysteen deegaanka Daniga maleeshiyaad ka tirsan Alshabaab.
Khasaare Dhimasho iyo Dhaawac ayaa la soo sheegaya in uu dagaalkaasi ka dhashay, waxaana hada la soo sheegaya in uu wali socdo dagaalka,
Labada dhinac ee dagaalamaya ayaa wali kala jooga goobihii ay ku dagaalameyn.
Daawo Muqtaar Rooboow Oo Ku Eedeeyay Alshabaab inay ka dambeeyeen Qarixii Zoppe.
Farmaajo “Turki waxaad noqoteen Dalkii ugu horreeyey ee nala qaybsada Musiibada dhacday